Amalitere ụlọ gọọmenti etiti na Podol District nke Kiev - RayHaber
HomeỤWAEurope38 UkraineHostlọ njem gọọmentị Metro na-emeghe na Podol District nke Kiev
Hostlọ njem gọọmentị Metro na-emeghe na Podol District nke Kiev
26 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 38 Ukraine, Europe, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Metro, VIDEO 0
Metro hostel, ụlọ gọọmentị mbụ na Ukraine nke na-eji ụgbọ ala ụgbọ oloko ochie, emepere na Podol district nke Kiev.
Ejiri ụgbọ agha, akpọrọ ụlọ nke ọ bụla aha ebe a ma ama si n'ọdụ ụgbọ mmiri ụwa. N'elu mgbidi nke ime ụlọ ndị ahụ, e nyere ozi banyere ọdụ.
Na Disemba 2017 ụgbọ ala abụọ bu Mihael Galparin zụtara ya na nro nke 546 maka otu puku UAH. Na mbido, Galparin, onye amaghi ihe aga eme ugba ugbo ala ndia, chetara 6 mgbe onwa gasiri.
N'ime ụgbọ ndị a tụgharịrị n'ime ụlọ 8, ndị 4 nwere ike ịnabata n'ime ụlọ ọ bụla. Ekwuputara ego nke ọnụnọ abalị dị ka 400 UAH. (Ihe ndetu Ukrhaber: Ntinye akwụkwọ na-egosi dị ka 450 UAH ma ọ bụ 105 TL.)
(Isi Iyi: Ukrhab bụ)
Mmecha nke okporo ụzọ na Alsancak, Izmir 06 / 06 / 2016 Na mpaghara Alsancak nke İzmir, emechara ụzọ a. Isgbọ njem n'okporo ụzọ na-enye ugbu a site na sheriff abụọ. Prime Minista Binali Yildirim, Mịnịsta nke Transportgbọ njem, Maritime Affairs na Nkwukọrịta, Izmir, Alsancak dị warara nke okporo ụzọ ahụ na ntinye aka na njedebe nke mkpọchi okporo ụzọ ruo ọtụtụ afọ mgbe ntụziaka ndị enyere maka ịbịanye aka na ụkpụrụ, General Directorate nke TCDD na Izmir Metropolitan Municipality bịanyere aka. Otu ndị otu Obodo bidoro ịrụ ọrụ ngwa ngwa, TCDD'ye bibiri mgbidi ubi. Ihe dị ka mita 1 weghachite…
Izmir ọhụrụ ụgbọ okporo ígwè amalitela ọrụ (Ụlọ Osisi Foto) 18 / 11 / 2016 E tinyere ọrụ ụgbọ okporo ígwè Izmir ọhụrụ: 240 nde pound pound na 95 5 ụgbọala na nkwado nke obodo Metropolitan Municipality nke Izmir, ụgbọala ọhụrụ 182 malitere ụgbọ okporo ígwè mbụ nke oge ọzọ. Ndị ọrụ Metro na-ekele ndị njem mbụ nke ụgbọ oloko ọhụrụ ahụ na okooko osisi. Izmir ndị mmadụ, "echiche ụgbọ mmiri" atụmatụ dịgasị iche iche na ụgbọ ala ụgbọ ala nyere akara zuru ezu. Ụgbọ okporo ígwè ọhụrụ ahụ, nke nwere usoro ụzọ mgbochi na-arụ ọrụ maka oge mbụ n'ime ụwa, na-enye gị ihe dị jụụ na nke dị nro site na ihe ndị ahụ na-emepụta roba n'etiti wiil ndị ahụ. İzmir Metro ga-abụ onye nwe nnukwu ụgbọ mmiri XNUMX na njedebe nke March na mmepụta nke ọhụụ ọhụrụ na-aga na China. Izmir ...
Onye isi oche CHP Kılıçdaroğlu tinyere òkè nke Agha banye na Car Car 10 / 06 / 2012 CHP ndú Kemal Kılıçdaroğlu, ikpe ziri ezi, na-ekwu na ọtụtụ nsogbu, "Ọ bụrụ na ị na-aghọta na obi ike na-maa jijiji nnu Coke na ikpe ziri ezi na a ọha mmadụ," ka o kwuru. CHP onyeisi oche nke onyeisi ndị isi nke CHP mbụ na Fatsa na Unye Kılıçdaroğlu bịara n'Agha ahụ gara Mayor Seyit Torun. President Torun N'oge nleta, President Kılıçdaroğlu Army Orduspor'un uwe elu na onyinye table na a echiche nke etti.kılıçdaroğl, mgbe ahụ na-eme mkpagharị, na-esote na Ataturk Ncheta, na-eguzobe cable ụgbọala na 2 350 28 mita n'ogologo na kabinet. Na-ekwu okwu tupu mmalite nke onye ndú CHP Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Army mara ezigbo mma P
Ejikọta T-Bar Teleski Muddy 21 / 03 / 2009 Kars apịtị T-mmanya skai inwego kpughere: Crystal snow na pine na-eje ozi na n'ọhịa apịtị T-mmanya skai inwego owuwu, Sarikamish aghọwo onye ọzọ skai ebe maka ịbanye skiers n'ime ọrụ na 2009 oyi oge. Nkọwa: Ogologo - 923 elu Iche mm Speed ​​234 - 0-3 m / s ikike - 800 p / h Number nke hanga - 71 Engine Power - kW eriri n'obosara 80 - 18 mm
Ụgbọala mbụ nke ụgbọ ala nke dị n'ógbè ahụ na-abanye na Gaziantep 31 / 05 / 2011 Na East na Southeast Anatolia dị ka Paris nke Gaziantep, Şahinbey Municipality mere ogige ọrụ natara a cable ụgbọala na ugwu sled, nwa amaala ruo mgbe ọ hụrụ oké mmasị site òtù nke protocol. Site Karataş Şahinbey Municipality, Yeditepe, guzosie ike 280 acre ebe n'etiti Güneykent na Şahintepe obi ekedi idaha yi oyiyi nke oghere nke Sahinbey Park. Turkey kasị elu na ụmụ play otu, esịnede 20 MiniaTurk ọrụ, ọgbọ egwuregwu, 950 na-aga na-adọba ụgbọala mita ebe mmiri eze na concerts, na nloghachi walkable ugwu cable ụgbọala na e ji ebu ihe e enịm ke ọrụ. Gọvanọ Gaziantep Süleyman Kamçı, AK General General Gaziantep
DHL 50 bu onye guzobere ulo oru ndi oru ugbo elu
Njikota Obodo n’ọdụ ụgbọ njem
Ezigbo Ọzụzụ maka Ndị Ọkwọ ụgbọ njem Ọha na Mobile Bus Simulator
Mmecha nke okporo ụzọ na Alsancak, Izmir
Izmir ọhụrụ ụgbọ okporo ígwè amalitela ọrụ (Ụlọ Osisi Foto)
Onye isi oche CHP Kılıçdaroğlu tinyere òkè nke Agha banye na Car Car
Ejikọta T-Bar Teleski Muddy
Ụgbọala mbụ nke ụgbọ ala nke dị n'ógbè ahụ na-abanye na Gaziantep
Ugwu Eren Ski Abata Ije Ozi
E tinyere oche ahụ na 1 kilomita 600 na Ilgaz n'ime ọrụ
E tinyere usoro ihe eji eme ski Center nke Ski Center na ọrụ
Mmiri nke oge a na-abanye n'ogige ntụrụndụ abụọ na ọdọ mmiri
E tinyeyela ụgbọ okporo ígwè USB nke Yenimahalle-Şentepe
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa October 2019 (396) September 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (633) June 2019 (504) Mee 2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (581) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (535) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)